Sida loo Delete nuqul Songs on iPhone More Si fudud
> Resource > iPhone > Easy Jidka An in ay tirtirto nuqul Songs on iPhone
"Waxaan leeyahay heeso nuqul labada computer iyo iPhone. Dambeyntii Waxaan is tusay sida ay u tirtirto songs nuqul ka Lugood. Si kastaba ha ahaatee, waa markii arrin cunaysa in ay tirtirto songs nuqul on iPhone mid mid. Suroobi karaa waddo fudud inuu i tirtirto songs nuqul on iPhone in Dufcaddii? "
Qofna ma jecla songs nuqul on iPhone, ma maxaa yeelay waxa ay qaadataa badan oo meel, oo inta badan sababtoo ah waxa ay saamayn ku yeelan doontaa niyadda ku riyaaqayaa music. Waxaad tirtiri kartaa heeso nuqul on iPhone by kabacdi ka bidix ilaa midig iyo dhejinta waaraadka Delete. Tani waa habka ugu fudud in ay tirtirto songs nuqul ka iPhone haddii aad qabto wax ka yar 10 songs in ay tirtirto. Haddii aad qabto daraasiin songs nuqul in ay tirtirto on iPhone, oo ay kugu qaadatay doono saacadood. In socda, waxaan kuu soo bandhigo qaab fudud oo ay tirtirto songs nuqul on iPhone in Dufcaddii.
Tallaabada 1. Ku rakib TunesGo
Download TunesGo. Labada MoblieGo ee macruufka (Windows) iyo TunesGo (Mac) ayaa laga heli karaa. Hel version saxda ah ee computer. In socda, waxaan TunesGo (Windows) qaado sida tusaale in uu ku tuso sida loo tirtiri songs nuqul on iPhone.
Tallaabada 2. Display songs iPhone daaqad
Connect aad iPhone la PC via cable USB ah oo aan bilowno TunesGo. Waxaa si buuxda la jaan qaada PC Windows. Iyo MobileGo taageertaa ugu dambeeyay 5s iPhone iyo 5c iPhone iPhone kale socda ee macruufka 7. Ka dib markii aan ogaanno aad iPhone, TunesGo u muujiyaan aad iPhone uu furmo suuqa hoose. Riix Media khaanadda bidix, waxaad arki doonaa heesaha oo dhan waxaa lagu soo bandhigay in Window Music.
Fiiro gaar ah: Ka hor inta aan la isticmaalayo TunesGo, waa in aad la rakibi Lugood aad kombuutarka hore. Haddii kale, TunesGo laga yaabaa in aan si fiican u shaqeeyaan.
Tallaabada 3. Delete songs labalaabka ka iPhone
Guji "liiska View" si aad u eegto gabayo liiska. Laga soo bilaabo liiska, waxaad si fudud u arki kartaa heeso nuqul. Fiiri sanduuqka hor songs nuqul> Riix "Delete" on sare ee daaqadda.
Iyadoo TunesGo, waxaad ka arki doontaa iyo tirtirto songs nuqul ka iPhone aragga. Iyo waxa ka badan, haddii aad ka heleen qaar ka mid ah heesaha oo laga helay ilo kale oo iPhone, waxaad isticmaali kartaa TunesGo si ay u gudbiyaan songs, kuwaas oo iPhone in iTuneswithout nuqul kuwa. Haddii song aad u socoto si ay u gudbiyaan si Lugood ayaa jiray, ka dibna icon Lugood ee suuqa kala TunesGo in la muujiyaa doonaa.
Isku day TunesGo Wondershare in ay tirtirto songs nuqul ka iPhone in Dufcaddii!
Watch Video ay bartaan sida loo Delete nuqul Songs on iPhone
Sida loo kaabta iPhone Music
Taageerayaasha Apple waa in ay ogaadaan: Taariikhda A Visual ah iPhone iyo macruufka [Infographic]
2 Siyaabaha Biinanka iPad si iPhone 3G Networks